Taariikhda My Butros » Iidooyinka iyo Arrrimaha ka Dating Gabadh yar
Last updated: Jan. 16 2021 | 2 min akhri
A dhawaan sahan soo jeedisay in rag loo eegin da'diisa doonayaan in ay taariikh haweenka ee 20s ay bartamihii. Haddii muujiyay baadhitaan ay tahay in la rumaysto, ragga xitaa ka weyn 40eeyaha, 50s, ama 60 door bidaan in ay taariikhda haweenka badan yaraa badan.
Waxaa jiray waqti marka bulshada ma aqbali xidhiidhada u dhexeeya ragga waaweyn iyo haweenka da'da yar; Si kastaba ha ahaatee, hadda wax isbeddel wayni iyo xiriirrada noocaas ah ayaa noqday quruxsan caadi ah. Inkastoo wax walba oo ku saabsan xiriirrada noocaas ma wanaagsana, mana aha kuwo gebi xun ama. Dooda hoos ka baadhayaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ama qasaarooyinka shukaansi haweenka da'da yar.
Gabdhaha, u sabab ah da, Sida caadiga ah la fureen yar shucuurta. Dumarka da'da wayn, Dhanka kale, inta badan lumiyaan jiidashada jilicsan oo sabab u ah uu maray baaritaan dheeraad ah iyo si taxne ee nolosha. Rag waaweyn raadiyo wada-hawlgalayaasha shukaansi oo iyaga u raaxayn kartaa ilaa iyo sidaas waa dhif xiiso dumarka dareen dhibteen.
Sida ragga duugoobaynin, ay u muuqdaan in ay noqdaan kuwo ka yar adventurous. Taas ayaa ka dhigaysa inuu fiiriyo inta ka weyn yahay waxa run ahaantii waxa jira. In aad la dumar ah oo wax badan ka yar waa ku caawin kartaa nin aad u hesho dib Yeel laga badiyay oo ay helaan tamar ku filan oo ay ku noolaadaan nolol si buuxda ah; tobansano ka mid ah haweenka da'da yar ay u muuqataa in ay ka shaqeeyaan yaabab, waayo, kuwani.
Dating haweenka da'da yar inta badan ka caawisaa ragga si ay u arkaan adduunka ka aragti ka duwan. Rag waaweyn badanaa bilaabi rumaysan in ay arkeen filan. Oo markii niman waxay bilaabmi shukaansi haween badan yaraa badan, oo ay noqotay in uu dhiso aragti ah ahaanba cusub. Xataa waxay bilaabi karaan in wax loo sameeyo in aanay sameeyo ka hor.
Koritaanka iyo xigmad iman kartaa oo kaliya marka uu qofku noqdo mid ka weyn; bayaan ka taagan tahay run ragga iyo dumarka labadaba. Waa wax aan macquul aheyn inay been abuur ah, kuwaas oo laba tayada. Inta ka dib markii qaraxa bilowga ah waa in ka badan xidhiidhada u dhexeeya nin waayeel ah iyo qof dumar ah oo ka yar toobad aqriska la'aan bisayl iyo xigmad ah dambaysta ah.
Haddii aad hesho xiriir la leh qof dumar ah oo wax badan ka yar waxaad ka badan galay, Waxa laga yaabaa in ay adag tahay in la sameeyo iyada faraxsan sariirta ay sabab u tahay iyada drive sare galmada. Haween badan ayaa hoos xaaladaha sida bilaabin raadinta lamaanahaaga kale galmo. Iyadoo ay taasi sameeyn qof dumar ah oo raali galin lahayd baahida iyada galmada, waayo, ninkii wuxuu caadadan of xaaskiisa kordhinaysaa fursadaha horumarinta cudurada galmada lagu kala qaado oo uu.
Marka shukaansi haween badan yaraa badan, Ragu sidoo kale laga yaabaa in lagu dhibayay iyada la'aan xiisaha degey iyo samaynta qoys. Maanta, Haweenka intooda badan in 20s ay bartamihii ama ka yar tahay doonaya in ay nolosha ku raaxaysatid, leeyihiin mustaqbalkooda kaamil ah, iyo kasban lacag aad u badan ka hor inta degey. Sida nin oo aan in yar yar mar dambe, mid ka lahaa hubaal ah uma arkaan in ay aad u fududahay in uu siiyo xaaskiisa waqti badan ka hor intuusan bilaabin qoys.
Sida xidhiidh kasta oo kale, xidhiidhada u dhexeeya ragga waaweyn iyo haweenka da'da yar ayaa sidoo kale waxay leeyihiin mudnaanta ay leeyihiin iyo hubaynta. Sidaas, in la sameeyo xiriirrada noocaas guul Labada qof u baahan in la fahmo si wanaagsan midba midka kale iyo waa in la jaan midba midka kale.